Colaadda Ukraine: Yaa awood badan milateriga labadan dal? | Saxil News Network
February 23, 2022 - Written by Baas Rashiid
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu amray in ciidammada dalkiisa ay galaan bariga Ukraine. Tallaabadaas ayaa waxa uu qaaday kaddib markii uu aqoonsaday madaxbannaanida laba gobol oo ay maamulaan fallaagada Ukraine.
Madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in milaterigiisa uu halkaas galaayo “si ay nabadda u ilaaliyaan”. Ameerika ayaa arrintaasi ku tilmaantay wax aan sax ahayn.
Haatan waxaa soo baxaayo sawirro laga soo qaaday milateriga Ruushka uu u ruqaansaday labada gobol ee Ukraine. Ruushka ayaa dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxa uu xadka uu la leeyahay waddanka Ukraine gaynayay tobannaan kun oo askari oo milateri ah. Haddaba qaar ka mid ah ciidammadaas ayaa waxa ay u tallaabeen dhinaca xadka Ukraine.
Milateriga Ruushka ayaa leh taangiyo iyo qalab kale oo ay howlgalkaas u adeegsanayaan, iyagoo dhanka kale gacan ka helaya ciidammada cirka iyo kuwa badda ee dalkaasi.
Isla waqtigaas, madaxweynaha Ukraine ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uusan jirin “cid uu ka cabsanayo”.
XIGASHADA SAWIRKA,RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
Meeqo ciidan oo Ruush ah ayaa jooga halkaas?
Waxaa la qiyaasayaa in ciidammada Ruushka ee gudaha iyo daafaha Ukraine jooga ay u dhaw yihiin 90 kun.
Jimcihii la soo dhaafay Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu halkaas geeyay 169,000 illaa 190,000 oo askari.
Michael Carpenter, safiirka Mareykanka u fadhiya Hay’adda Yurub u qaabilsan Ammaanka iyo Iskaashiga, ayaa sheegay: “Tiradan waxaa ku jira ciidammada jooga xadadka Ukraine iyo Belarus, iyo gobolka la haysto ee Crimea. Waxaa intaasi dheer, in tiradaas ay ku jiraan ciidammada ammaanka ee Ruushka ee aagagaas ku sugan.”
Ciidammada ilaalada iyo kooxaha kale ee ammaanka maxalliga ah ayaa sidoo kale ku jira, iyo weliba ciidammada uu hogaamiyo Ruushka eek u sugan bariga Ukraine.
Isla waqtigaas, wasiirka gaashaandhigga ee Britain, Ben Wallace, ayaa sheegay in 60% ee milateriga Ruushka ay joogaan meel u dhaw xadka waddanka Ruushka iyo Belarus.
Dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Ukraine ayaa sheegay in ciidammadu ay gaarayaan 149,000.
Ruushka waxba arrimahaas oo dhan kama oran. Kuxigeenka danjiraha Ruushka u fadhiya Qaramada Midoobay Dmitry Polansky ayaa sheegay: “Waxaas oo dhan waa sida qalbi carruurnimada ah ee ay u fakarayaan saaxiibadeen Galbeedka.”
Todobaadkii tegay, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah ciidamadeeda ku sugan degmooyinka koonfurta iyo galbeedka ay soo afjareen dhoollatuskii ay wadeen ayna dib ugu laaban doonaan xarumahoodii.
Hasayeeshee gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay in aanay arag wax cadayn ah oo muujinaya arrintaas oo deegaannadaas lagu arki karo.
Xoghayaha Guud ee NATO, Jens Stoltenberg, ayaa markaasi sheegay: “Si taas ka duwan, waxa ay u muuqataa in Ruushku uu kordhinayo milateriga halkaas ka jooga.”
Saraakiil reer Galbeed ah oo aan doonayn in magacooda la sheego ayaa sheegay in xogta sirdoonka ee ay haatan uruurinayaan ay muujinayso in ciidammada Ruushku ay gaareen heer ay ku weerrari karaan Ukraine.
Waxa ay sheegeen in saddex meelood oo meel ciidammada Ruushka ay joogaan meel 50 km u jirta xadka.
Sawirro lagu qaaday dayaxgacmeed ayaa sidoo kale muujinaya in qaar ka mid ah ciidammada Ruushka loo qaybiyo unugyo yaryar kuwaas oo ku sugan xadka Ukraine.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, khubaro badan ayaa rumaysan in Ruushku ay tahay in ciidammo badan uu abaabulo oo weliba ka badan kuwa hadda ay keeneen xadka, si ay si buuxdo ugu weerraraan waddanka Ukraine, si ay u qabsadaan inta badan ama dhammaantiisba.
Awoodda milateri ee Ukraine iyo taageerada NATO
Milateriga Ukraine ayaa wax badan ka yar midka Ruushka, hasayeeshee waxa uu midka Ukraine garab ka helayaan isbahayshiga NATO.
Mareykanka ayaanan wax ciidan ah u dirin Ukraine balse waxa uu 3,000 oo askari oo dheeraad ah uu u diray waddammada Poland iyo Romania si ay u xoojiyaan ciidammada NATO ee halkaasi ku sugan, waxa uuna heegan galiyay 8,500 oo askari oo kale.
Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu diray hub qiimahiisa uu ku kacayo $200 oo milyan, oo ay ku jiraan qalabka Javelin ee ka hortaga taangiyada iyo mid ka hor tagga gantaallada ay diyaaradaha soo ridaan. Sidoo kale waxa ay dalalka xubnaha ka ah NATO u ogolaatay in hub Mareykanka uu sameeyay ay siiyaan Ukraine.
Britain ayaa iyadu waxa ay Ukraine siisay 2,000 oo gantaal oo ridada dhexe ah oo loogu talagalay in lagu weerraro taangiyada, halka 350 askari ay u dirtay waddanka Poland, iyadoo dhanka kale laba laabtay awoodeeda milateri oo waxa ay dirtay 900 oo askari oo dheeraad ah oo ay gaysay Estonia.
Britain ayaa waxa ay diyaarado dagaal oo kale ay dirtay koonfurta Yurub iyo markab dagaal oo ku biiraya ciidammada NATO ee ilaalinaya badweynta Mediterranean-ka.
Sidoo kale waxa ay heegan galisay 1,000 askari si ay u falgalaan haddii uu weerrar dhaco oo ay dhanka bini’aadamnimada gacan uga gaystaan gudaha Ukraine.
Denmark, Spain, France iyo Netherlands ayaa sidoo kale waxa ay direen dagaalyahannadooda iyo maraakiib tagaysa Bariga Yurub iyo bariga badwaynta Mediterranean-ka.
Dhanka kalana, Faransiiska ayaa qorshaynaya inuu hogaamiyo milateriga NATO ee ku sugan Romania iyadoo uu ciidamo u dirayo halkaas, hasayeeshee NATO ayaa waxa ay sheegaysaa in dhowr todobaad ay ku qaadan doonto in qorshahaas ay si buuxdo u soo afjarto.
Markii ugu dambaysay maxay NATO u samaysay Ukraine?
2014-kii dadka Ukraine ayaa waxa ay awooddii ka tuureen madaxweynihii u janjeeray Ruushka, kaddib markii Ruushku qabsaday gobolka koonfureed ee Crimea.
Sidoo kale waxa uu gacan ka siiyay kooxaha goonni u goosadka ee gacansaarka la leh Ruushka inay qabsadaan dhul ballaaran oo ka tirsan bariga Ukraine.
XIGASHADA SAWIRKA,AFP VIA GETTY
NATO waqtigaas ma aanay faragelin arrinta, balse waa markii ugu horraysay oo ay ciidammadeeda gaynayso dalal badan oo ku yaal Bariga Yurub si ay arrintan uga jawaabto.
Muxuu Putin uga carooday madaxa sirdoonka dalkiisa?
Madaxweynaha majaajileystaha ahaa muxuu ka bedali karaa xaaladda Ukraine?
NATO ayaa afar gaas oo dalal kala duwan ka yimid waxa ay gaysay wadammada Estonia, Latvia, Lithuania iyo Poland iyo hal guuto oo dalal badan ka yimid oo ay Romania gaysay.
Waxa ay sidoo kale sare u qaadday la socodka saldhigyada cirka ee dalalka Baltic-ga iyo Bariga Yurub, si diyaaradaha dagaalka ee Ruushka loo qabto haddii ay ku soo xad gudbaan cirka dalalka xubnaha ka ah NATO.
Ruushka ayaa ka caraysan arrintan waxa uuna doonayaa in ciidammadiisa ay baxaan.